Wararka - Si loo wanaajiyo waxtarka toogashada qarxa, ma dooratay wax xoqan ee saxda ah?
Si loo wanaajiyo waxtarka xabbadda toogashada, miyaad dooratay wax xoqid sax ah?
Xabad toogashowaa habka caadiga ah ee daaweynta dusha sare ee biraha. Waxaa si ballaaran loo isticmaalaa in loo shubay, birta, shaqa-dhismeedka qaabdhismeedka, qaybaha wax soo saarka birta iyo warshadaha kale. Iyadoo la horumarinayo sayniska iyo teknolojiyadda iyo horumarka xoogga leh ee wax soo saarka, waxaan leenahay shuruud sare iyo sare oo loogu talagalay tayada daaweynta dusha sare, qiimaha, iyo waxtarka iwm. taasoo la xiriirta tayada dusha sare iyo qiimaha badeecada, sidaa darteed waxay soo jiidatay fiiro badan oo dheeri ah.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee saameeya waxtarka toogasho ku qaraxday:
1. Tayada maadada loo adeegsado toogashada toogashada: sida nooca, saamiga, muujinta waxqabadka (adkaysiga, nolosha daalka) ee abrasalka, iwm;
2. Caqli galnimada habka toogashada toogashada: waqtiga toogashada, xawaaraha, socodka, iwm;
3. Caqli-galnimada mashiinka toogashada toogashada ee gobolka: xagalka toogashada, gobolka kala-goynta, boodhka saamaynteeda, iwm.
☛Xidhiidhka u dhexeeya cabbirka walxaha iyo waxtarka:
Tirada walxaha wax lagu nadiifiyo ee ay tuurayaan qalabka nadaafaddu halkii cutub way weyn yihiin waana labanlaabmay isla miisaankaas, waxtarka nadiifinta si hufan ayaa loo horumarin karaa.
Saamaynta saamiga isku darka aaladda ee ku-oolnimada:
Waa cashar xanuun badan oo isticmaalayaashu u soo iibsadaan abrasives tayo jaban oo tayo hoose leh, taas oo dhawr boqol oo yuan ka raqiisan qiimaha cutubka. Si kastaba ha noqotee, qashinka kharashka ah ee ay keeneen yaraynta wax-ku-oolka toogashada ayaa aad uga badan qaddarkan, waana in la xisaabiyo qiimaha luminta ay sababtay nolosha adeegga hooseeya.
Marka la eego isbeddelkan, waxaan si guul leh u soo saarnay nooc cusub oo ah abrasives waxqabad sare leh - wasakhda isku darka kaarboon yar（Toogashada biraha kaarboon-hooseeya）- kaasoo sifiican uga caawin kara wershadaha inay gaaraan ujeedka yareynta qiimaha iyo kordhinta waxtarka. Waxaan haynaa koox adeeg farsamo oo xirfadlayaal ah, oo ay weheliso sanado badan oo waayo-aragnimo ah adeegga macaamiisha, iyada oo loo marayo hagaajinta saamiga walxaha xoqan iyo hagaajinta xuduudaha qalabka mashiinka, waxaan si wax ku ool ah u horumarin karnaa waxtarka toogashada, ka caawinta hawlwadeennada inay ogaadaan caatada maaraynta geedi socodka qarxinta toogashada, oo u rogo khasaarada faa'iido, iyo si guul leh uga caawiya yareynta kharashyada iyo kordhinta waxtarka.
Intaa waxaa dheer bixinta alaabooyinka waxqabadka sare leh, waxaan diirada saareynaa cilmi baarista tiknoolajiyada qarxinta toogashada, u shaqaalee khabiiro qarxa toogashada caan ku ah gudaha iyo dibedda sida taageerada farsamo ee shirkadda, waxay leedahay koox adeeg farsamo oo xirfad leh, waxaanan bixinaa kumanaan kun oo goobta ah adeegga macaamiisha sanad walba, iyadoo diiradda la saarayo bixinta taageero farsamo iyo adeegyo loogu talagalay codsiga qarxinta toogashada, Diirad saar cilmi baarista iyo horumarinta ka soo saarka tikniyoolajiyadda xaaqan ilaa teknolojiyadda dalabyada wax soo saarka illaa teknolojiyadda isticmaalka goobta.
Ka dib injineerka kaararka raadraaca goobta, caawin iyo hago macaamilka faahfaahinta goobta;
1. Aasaasida iyo hagaajinta nidaamka maaraynta ee ku darida iyo adeegsiga walxaha qarxa toogashada;
2. Maareyn sifaysan (Qaabaynta dhijitaalka ah ee saamiga isku dhafan ee abrasive).
Isku-darka wax-soo-saarka wax-ku-oolku wuxuu ku lug leeyahay qaybinta dheelitirka ee qaybo waaweyn, dhexdhexaad iyo yaryar. Qaybintu si isdaba joog ah ayey isu beddeshaa sababtoo ah sii xumaanta abraska ah ee ay keento saameynta soo noqnoqda ah ee dusha sare ee qalabka shaqada. Wixii abrasives muddo gaaban ah, way adag tahay in la ilaaliyo dheelitirka saxda ah sababtoo ah burburka degdega ah iyo ka saarista nidaamka. Isbeddelladaas ku saabsan qaybinta cabbirka ayaa si toos ah u saameeya dhammaadka dusha iyo wax soo saarka.
Waqtiga tallaalka toogashada waxaa laga gaabiyey 90 ilbiriqsi illaa 80 ilbiriqsi, waxtarkana waxaa lagu kordhiyay in ka badan 10%;
Meelo badan oo toogasho ka dhacday ma ahan kuwa xirfad ku filan u leh isticmaalka aargoosiga ah iyo hagaajinta toogashada toogashada, ama goobta ayaan wali gaarin shuruudaha maaraynta ganaaxa, taasoo keentay waxqabadka ama faa iidooyinka toogashada abrasive abrasive aan si fiican loo ciyaarin.
Jawiga sii kordhaya ee tartanka suuqa, shirkadaha waxsoosaarka ayaa sidoo kale ka walaacsan dhimista qiimaha xiriir kasta oo soo saar. In kasta oo aan ka walaacsanahay waxyaalaha waaweyn iyo iskuxirayaasha muhiimka ah sida alaabta ceeriin, dhalaalida, alxamida iyo dhalidda, waa inaan fiiro gaar ah u yeelanno xakamaynta nadiifinta rasaasta. Xulitaanka waxqabadka sare ee abrasada iyo toogashada xirfadleyda ah ee farsamada ayaa shaki la’aan fure u ah hagaajinta waxtarka nadiifinta Habka ugu habboon ee lagu dhimi karo kharashyada, isbedelkani wuxuu dhiirrigelin doonaa tikniyoolajiyadda dalabkatoogasho ku qaraxday iyo hagaajinta xakamaynta kharashka!
Ka sokow shot steel steel yar：
TAA sidoo kale wax soo saar biraha toogashada,birta birta,xabad toogasho ah,silig la gooyey oo bir ah,birta ahama,silig kaarboonka birta ah, warbaahinta isbuunyada wasakhda leh,silig aluminium gooyay, zinc silig la jaray, silig goos goos ah,garnet iyo wixii la mid ah.
TAA's mashiinka qarxa & qalabka dayactirkasidoo kale waxay ka caawin kartaa macaamiisha inay gaaraan hal-ku-adeegasho dalab qaraxan!